Kutumira - Buddhatrends
Isu tinotakura pasi pose tichifukidza North uye South America, Europe, Asia, Africa, Oceania, nezvimwe. Isu tinoshandisa iyo mizinda yakawanda, inovimbwa nevatakuri vemarudzi ose kuti tive nechokwadi chekuti purasi yako inosvika paunopinda wakachengeteka uye yakachengeteka.
Mirairo inowanzoenda kumazuva e7 kuti aite zvisati yatumirwa-kusina mavhiki ekupedzisira uye mazororo. Panguva dzezororo kushandura nguva dzinogona kutora kusvika kumazuva 14.
Dare reUnited States richaendeswa ne e-packet uye International Orders dzichaendeswa zvichienderana nekuzadzika mukati iyo chigadzirwa chinobva.
Kutora Nguva kuUnited States: 12 - 20 Mazuva emabhizimisi
Pane mamiriro ezvinhu asingagoni kudzora (njodzi dzinongoitika dzoga, mazororo, mamiriro okunze, nezvimwewo) izvo zvinogona kukonzera kutengesa kushambadzira. Kunyange zvazvo mapuraneti akawanda achisvika nenguva, pangava nemamiriro uye kunonoka kuti vatakuri vedu vanogona kuwana. Nokuda kwechikonzero ichi, hatirevi nguva chaiyo yekuendesa; iyo inoburitswa ibasa ndiro mutoro wekambani yekutumira.
CHII CHINOKOSHA KUSHANDISWA KUTI KUDZIDZIRWA?
Nhume yekuendesa kunonyanya kubva pane kuzadzika kwedu. Ichi ndechokuti chigadzirwa chedu chakasvibiswa kubva munyika dzakasiyana siyana kuti chive nechokwadi chokuti iwe unowana mutengo wakanakisisa waro. Courier maitirwo anosiyana kubva kune dzimwe nyika. Pasina bhizimisi rakasimbiswa nebasa rekutumira, hatikwanisi kuwana mari inodhura saizvozvo maererano nekukurumidzira kwatingazokanganiswa kumisika yepasi rese yakadai seAmazon nezvimwe zvakadaro.
Tinoita zvatinogona kuti tiwedzere mari yekuguma kwako kuitira kuti urege kubhadhara mitero yakakwirira / mapaimisi kuti uwane zvinhu zvako. Kana iwe ukaisa urongwa pamwe nesu nokuda kwezvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvichange zvichitumirwa mune imwe pfupa rimwe. Ndapota bvumirai nguva yokuti zvinhu zvenyu zvose zviuye.
Mitengo inoratidzwa pamubatsiro wakosimba ivai zvakasiyana nezvamakarayira asi fadza usanetseka. Kazhinji izvo kuzadzikiswa kwatinoitwa nepakati kwaizoita ndechekucherechedza semitengo yakadzika zvikuru kana kuisa zvinhu sezvipo zvachose. Izvi ndezvokudzivirira mitero / tsika yekutengeserana inoshandiswa pakuguma kwako sekune dzimwe nyika izvi zvikwereti zvinowedzera zvinodhura.
Chero ani zvake pamba anogona kugamuchira pepa panzvimbo yemutengi. Kazhinji, mupositori achasiya chikwereti chekuunganidza kana pasina munhu ari pamba uye iwe unogona kutora chikamu chako pahofisi yako yepedyo iri pedyo.
Kunyangwe tichikukurudzira zvikuru kuti uongorore maitiro uye aderesi tisati taisa urongwa nesu, tinonyatsonzwisisa kuti zvinhu zvinouya uye zvikanganiso zvinogona kuitwa. Tinoshandisa mirairo zuva rimwe chete ravanoiswa. Kana shanduko inoda kuiswa kurongeka yako tapota tibvunze isu kuburikidza nefomu rekubatana panzvimbo yedu yepaiti ASAP uye tichaita zvatinokwanisa kuti tigone kuchinja shanduko iyi, asi isu hatigone kuita zvipikirwa. Kana chinhu (s) chakatotumirwa kubva pakutsika kwatinoita isu hatigoni kuita shanduko kuhutano. Munyaya iyo, unogona kutumira chinhu kune iri pedyo neRegional Warehouse uye kamwe wakagamuchirwa tinokwanisa kutumira chinhu chakagadziriswa. Ndapota taurai nesu kuti tione kuti Ndeipi iri pedyo neChipatimendi chekuchengetedza nzvimbo kubva kunyika yako.
Ndapota taura nesu uye tichafara kupindura chero ipi zvayo mibvunzo yako!